Blogger Of This Week: Shiva - MeroReport
Blogger Of This Week: Shiva
शिव ज्ञवाली, एक गैरसरकारी संस्थामा काम गर्नुहुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आमसञ्चार तथा पत्रकारिता अध्ययन गरिरहनुभएका ज्ञवाली वातावरण र साहित्यिक ब्लगहरू लेख्न बढी मन पराउनुहुन्छ । मेरोरिपोर्टमा नियमित योगदान गर्ने शिव यो साता मेरोरिपोर्टमा साताको ब्लगर हुनुहुन्छ । सधैंका साताको ब्लगरसँग जस्तै उहाँसँग पनि ब्लगिङको सन्दर्भमा कुराकानी गरिएको छः
मैले २०६५ सालदेखि ब्लग लेख्न थालेको हुँ। सुरुका ब्लगहरुलाई विविध कारणवश निरन्तरता दिन सकिएन। सुरुमा लगभग ६ सात वटा ब्लग बनाएँ। तर, पछिल्लो समयमा जब मैले वनकाइँलाको गन्थन सुरुवात गरें त्यसपछि आफ्नो ब्लगकर्मलाई निरन्तरता दिईरहेको छु।
सुरुवाती दिनमा साथीहरुले ब्लग बनाएको देखेर लोभ लाग्थ्यो। अहिले यो आवश्यकता बनेको छ। मैले मेरा कुरा सेयर गर्न पाएको छु । अभिव्यक्तिका लागि लेख्नका लागि र सुनाउनका लागि म मेरा कुरा मेरो अनुभव र बुझाई बाँड्न चाहन्छु।
मेरो मुख्य लेखन प्रकोप व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन हो। साहित्यका कुराहरु पनि लेख्छु। विशेष गरेर खोजमूलक र अनुसन्धानमा आधारित सामग्रीहरु मेरा विशेषता हुन्। म मनगढन्ते कुरा लेख्दिन। तर, साहित्यको पाटो बेग्लै हो। फिचरहरु, रिपोर्टहरु बढी लेख्ख्छु। प्रकोप व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरुको बारेमा जानकारी र सूचना प्राप्त गर्नका लागि तपाईं मेरो ब्लग हेर्न सक्नुहुन्छ ।
के फरक भेट्नुहुन्छ मूलधारको मिडिया र यो बैकल्पिक मिडियामा?
मूलधारका मिडियाहरु सैद्धान्तिक रुपमा र व्यवहारिक रुपमा पनि पत्रकारिताको मर्मलाई आत्मसात गर्न सकेका छैन। यो मेरो आरोप होइन वास्तविकता हो। हाम्रा विचारहरु र खोजहरु आजपनि मूल धारका मिडियामा पहुँच राख्दैनन्। कथित जनताको पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन हुँ भन्नेहरु व्यापार र व्यक्तिलाई भन्दा अन्य कुरालाई स्थान दिन सकेका छैनन्। समय र दुरीको हिसावमा पनि वैकल्पिक मिडिया बढी अन्तर्क्रियात्मक, पहुँच योग्य र द्रुत भएका छन्। भरपूर स्वतन्त्रता छ। वैकल्पिक मिडियाले प्रेस स्वतन्त्रताको अनुभूति दिनसकेका छन्।
तपाईंलाई विश्वास नलाग्न सक्छ। मेरो त ब्लगको एकजना बुटबलको केटी साथी केजी फ्यान हुनुहुन्छ। उहाँले ब्लगमा कविता पढेकै कारण परिचय भएको हो र अहिले पनि निरन्तर सम्पर्क हुन्छ। अर्कोकुरा म एउटा सञ्चार संस्थासँग आवद्ध भएको हुनाले पनि वातावरण तथा प्रकोपसम्बन्धी मेरो ब्लगको अर्को कुनै विकल्पमा प्रकाशित भएको कविता एउटा साहित्यिक पत्रिकाले साभार गरेर प्रकाशित गरेको थियो। त्यसैगरी। पहिला त म पोष्ट गर्न पनि आउँदैनथ्यो युनिकोड मा आँउदैनथ्यो ।
सैद्धान्तिक, व्यवहारिक वहस, परम्पराबाट आनुनिक तर्फ नजिक। मेरो रिपोर्टसँग मेरा सुरुवाती दिनहरु निकै रमाइला छन्। एकजना साथीबाट मेरो रिपोर्टको बारेमा थाहा पाएको हुँ। म यसको सुरुको सदस्य हुँ जस्तो लाग्छ। यसमा मेरो ठम्याईअनुसार धेरैजसो पत्रकारिता अध्ययनरत साथीहरुको सहभागिता रहेको पाएको छु। यसले हामीलाई अझ व्यवसायिक र एकीकृत गर्ने छ भनने विश्वास लागेको छ ।
शिव ज्ञवालीको ब्लगः http://bankailas.wordpress.com
मेरोरिपोर्टमा प्रोफाइल पेजः http://meroreport.net/profile/shivagyawaliBankaila
ट्वीटरमा शिवः @Bankaila
Comment by Suman Luitel on April 30, 2011 at 1:07am
dami6bankainla ko int
Comment by Narayan Poudel on April 29, 2011 at 3:22pm
Congrats!!!!!!!!!!!!!!!!! Dude.......... keep it up............... you are great
Comment by सरोज कार्की on April 29, 2011 at 12:49pm
Comment by shiva gyawali Bankaila on April 28, 2011 at 5:01pm
तपाईँहरुको सहरमा मेरो लागि तपाईंहरुलाई नै धन्यवाद दिने मीठो कुनै शब्द भेटिएन । हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
Comment by एसवी गौतम on April 28, 2011 at 11:29am
Comment by Mukunda Nepal on April 28, 2011 at 10:34am
Comment by Santosh Devkota on April 28, 2011 at 10:10am
Congratulation Shiva, I love to read your blog post more with best.